Khilaaf Xooggan Oo Ka Dhex Qarxay Farmaajo Iyo Rooble. – Bogga Calamada.com
Khilaaf Xooggan Oo Ka Dhex Qarxay Farmaajo Iyo Rooble.
War qoraal kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha dowladda Ridada federaalka Soomaaliya murtad Maxamed Xuseen Rooble ayuu shaqadii kaga joojiyay taliyihii hayadda sirdoonka iyo nabadsugidda xukuumadda Ridada murtadka lagu magacaabo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Rooble ayaa warqaddiisa shaqo ka joojin ku xusay in taliyaha jawaasiista dowaldda Riddada uu ka madax adeegay amarkii kasoo axay xafiiskiisa kaas oo ku aadanaa in uu warbixin dhamaystiran ka keeno kiiska gabadhii sarkaaladda ahayd ee ka mid ahayd saraakiisha sirdoonka dowlada Ridada.
warqoraalka Rooble waxaa lagu sheegay in uu shaqo joojin ku sameeyay Fahad Yaasiin uuna si KM gaar ah u magacaabay Bashiir Goobe oo horay ugu soo fashilmay hoggaaminta maleeshiyaadka waxa loogu yeero Asluubta dowladda Ridada.
Madaxwaynaha dowladda Ridada federaalka Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa dhankiisa ganafka ku dhuftay shaqo joojinta uu sameeyay Rooble isagoona tallaabada ra’iisul wasaaraha Ridada ku qeexay mid baalmarsan xeerarka dastuur gaaleedka u degsan kooxda.
Warqoraal kasoo baxay Villa Somalia ayuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku amray Fahad Yaasiin in uu sii amba qaado howlihiisa shaqo. wuxuuna hayadda sirdoonka dowladda Ridada faray in waxa loogu yeero golaha amniga qaranka ay hor keento warbixintii uu ka sugayay ra’iisul wasaaraha kooxda Ridada Soomaaliya.
Khilaafka soo kala dhex galay Farmaajo iyo Rooble waxa uu kusoo beegmayaa xilli ay meel xassaasi ah marayso xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxayna tani kor usii qaadaysaa kala qoqobnaanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta Soomaalida.